Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo?
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? 3 sano 1 bil ka hor #614
Fariintaan waxaan u dirayaa si aan u ogaado taas add-onmostly inta badan waxaad dooneysaa inaad cusbooneysiiso, maadaama aan hadda cusbooneysiin doono wax yar, waxaad si weyn iga caawin doontaa inaan ogaado meesha aad sida ugu badan u doonayso.
Iyo habka, haddii aad sidoo kale iigu siin kartaa link to version version (website ka kale) waxay noqon lahayd fantastic.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Gh0stRider203, Jodsalz1, Xumbo @ xabbo
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? 3 sano 1 bil ka hor #615
OK ugu horreeya oo dhan, khaladaadka qaarkood ...
A320 mega Pack, ayaa sii haysa burburka. Aad bey u dagan tahay aniga FSX, garan maayo sababta.
Thomas Ruth A330 / 340, PFD ma muujineyso labadaba STALL oo dhan ... oo dhan.
Duulimaadyada Emirates, oo aad u xun FPS, ayaa ku dhaca FSX...
Cusbooneysiinta suurtagalka ah ...
Waa hagaag, waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la isku daro A330 / 340 by TR, oo leh A320 Mega Pack, si ka duwan si loo isku duwo qoob - ka - celinta oo aad u fiican.
A380, wax la mid ah, PFD ma muujinayso labada waardiye iyo kuwa badan.
Haddii aan xusuusto wax kale, waxaan halkaan ku dhejin doonaa.
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? 3 sano 1 bil ka hor #616
Dariussssss, taas oo dhan waa mid si fudud u fudud !!!
1) Ka saar qalabka diyaaradaha ee Airbus;
2) BANDHIGA HAWL
3) Bedelka Boeing
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: digaaga
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? 3 sano 1 bil ka hor #617
Waxaan jeclaan lahaa inaan arko Boeing 757 oo leh VC tayo leh mararka qaar mustaqbalka. Waxaan u maleynayaa in 757 uu ka baxay FSX si fiican u fiican.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Xumbo @ xabbo
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? 3 sano 1 bil ka hor #619
D115 ayaa qoray: Waxaan jeclaan lahaa inaan arko Boeing 757 oo leh tayo sare oo VC ah mustaqbalka. Waxaan u maleynayaa in 757 uu ka baxay FSX si fiican u fiican.
Haddii aad diyaar u tahay inaad ku bixiso $, Tilmaamaha Tayada 757 waa mid aad u fiican
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? 3 sano 1 bil ka hor #649
Qaar ka mid ah diyaaradaha ayaa ka dhigaya mishiinnada mashiinka maxaa yeelay waxay u egtahay mid aad u xun marka ayan dhicin # xagjirnimada
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? sano 3 2 todobaad ka hor #669
Sidii dad badan loo cusbooneysiiyay P3D4 intii suurtagal ah, iyo VCs gabi ahaanba.
Laakiin cusbooneysii v4 A320 iyo B737-800 sida ugu dhakhsaha badan qoraaga uu doonayo ......
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? sano 3 2 todobaad ka hor #671
Waxaan jeclaan lahaa VC ka wanaagsan oo loo yaqaan 'Airbus A400M'. Sidoo kale, haddii qoraagu awood u yeelan karo inuu ku siiyo tilmaamo si uu uga dhigo mid gacan yar dhulka ka buuxo, taasi waa wax laga naxo. Wuu ka baxaa HARD, mana garan karo (mana garan karo) inaan helo dariiq aan ku xiro matoorada inta lagu jiro taksi.
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? sano 3 2 todobaad ka hor #673
the Boeing 777 pls for P3D v3 / v4
Qorshe hawleedka VC oo buuxa
Waa kuwee add-ons Ma jeclaan lahayd in la cusboonaysiiyo? sano 3 2 todobaad ka hor #674
Muraayadaha muraayadaha, VC dhab ah ee 380
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.291